Ukuhlola Izinga Lesiza Sakho ngosesho olwenziwe ngezifiso | Martech Zone
Elinye lamakhasimende ami lifonele ngesonto eledlule labuza ukuthi kungani, lapho lisesha, isiza salo sasiqala ukukleliswa kodwa omunye umuntu wamfaka phansi ekhasini kancane. Ukube awuzange uyizwe le ruckus, I-Google ivule usesho olwenziwe ngezifiso imiphumela unomphela.
Lokho kusho ukuthi ngokuya ngomlando wakho wokusesha, imiphumela yakho iyohluka. Uma ubheka izinga lamasayithi akho, cishe uzothola ukuthi konke sekuthuthuke kakhulu. Kodwa-ke, kungenzeka bathuthukele wena kuphela hhayi omunye umuntu. Ukuhlola ngempela izinga lakho, uzodinga ukucisha imiphumela yokusesha eyenziwe ngezifiso.
Kunezindlela ezintathu zokucima ukusesha okwenzelwe wena:
Ukuze uqinisekise okwesikhashana ukuthi icishiwe, phuma kunoma yiluphi uhlelo lwe-Google ongene kulo. Njengesilinganiso esingeziwe, vula Ukuphequlula Okuyimfihlo kusiphequluli sakho (Konke ukukhishwa kwesiphequluli kwakamuva kunakho .. kwe-IE, kufanele ube ku-IE8).
Susa noma yimaphi amakhukhi ku-Google. Lokhu kuzokungenisa lapho ukusesha kungenziwanga uqobo. Futhi, Ukuphequlula Kwangasese eSafari, Firefox noma i-IE8 kufanele ibe nomthelela ofanayo. Ku-Google Chrome, isici sibizwa ngokuthi Ukuphequlula kwe-incognito.
Ukuze ususe unomphela umlando wakho, ngena ngemvume ku Umlando Wokusesha ku-Google bese uyikhubaza. Iya ku-Akhawunti Yami bese uqhafaza Hlela eduze kweMikhiqizo Yami bese uqhafaza Susa umlando wewebhu unomphela. Lapho umlando wakho ususwa, azikho izindlela zokwenza imiphumela yakho yosesho ibe ngeyakho. Ungahle udinge ukukwenza lokhu kaningi.
Uma ungathanda ukwenza kube lula kuwe, ngincoma ukuthi ushintshele ku (ngokuxakile) i-Google Chrome. Ungavula i-Incognito Window (ctrl-shift-N) futhi ngeke ifinyelele kumlando wakho wosesho noma isethe amakhukhi… uzokwazi ukuhlala ungene ngemvume ku-Google ewindini elilodwa naku-incognito ewindini elisha. Yindlela engisithathe ngayo isithombe-skrini esingenhla… ngezifiso ngakwesobunxele futhi angenzi ngezifiso ngakwesokudla ewindini le-incognito.
Ubuhle beGoogle Chrome ukuthi Ukuphequlula Kwangasese izici zezinye iziphequluli zenza wonke amawindi abe yimfihlo. Awunakuba nokunye okukhona nokunye okungekho. I-Chrome yenze umsebenzi omuhle ekwenzeni lokhu kungabi namandla.
Khumbula ukuthi lokhu akusanikezeli ngokunemba okuphelele. Idivayisi yakho nendawo okuyo kusazothinta imiphumela. Ukubheka kwangempela amazinga akho, ungabuka I-Google Search Console futhi ngincoma kakhulu ukuthi ubhalisele Semrush.
Tags: usezingeni-incognitousezingeni elingukhiyeamazinga wegama elingukhiyeusesho olwenziwe ngezifisousezingeniikhasi lemiphumela yokusesha injiniusezingeni lemiphumela yenjini yokuseshainyokausezingeni le-serp
Dec 17, 2009 ku-8: 48 AM
UDoug, siyakuhalalisela! Ungumuntu wokuqala ukuncoma ukusetshenziswa kokuphequlula i-icognito ngaphandle kwe-obvious esobala
Dec 17, 2009 ngo-6: 36 PM
Ingabe i-incognito isebenza kahle njengoba ikhangisiwe?
(futhi kungani ngingenakusebenzisa i-ID yami ye-wordpress ukuphawula?)
Lokhu kungenye yalezo zilula zokuthumela okuvele kunamathele ekhanda lami. Ngakho-ke, namuhla lapho bengidinga lolu lwazi, bekuyindlela elula ukuyizingela nokusebenzisa ukufunda. Ngiyabonga, ngilande i-Chrome futhi ngasebenzisa amakhasi e-Incognito ukuhlola ukusesha okuthile. Ngiyabonga!